रुपन्देही क्षेत्र न.२ : काँग्रेस ‘कमब्याक’को कसरतमा,एमाले ‘ह्याट्रिक’ दाउमा-Nagarikaawaj.com
रुपन्देही क्षेत्र न.२ : काँग्रेस ‘कमब्याक’को कसरतमा,एमाले ‘ह्याट्रिक’ दाउमा
पौडेल भन्छन् ‘बुटवलबासीले मेरो विकल्प खोज्दैनन् ’ युवराज भन्छन् -मेरो घरै बुटवल,मलाइ सबैको माया र सद्भाब छ ’
कपिल ज्ञवाली/बुटवल,मंसिर १८ ।
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई पराजित गरेर चर्चामा आएका एमालेका बिष्णु पौडेल रुपन्देही २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि निर्बाचन लड्दैछन् ।
उनी नेपाली कांग्रसका महाधिबेशन प्रतिनिधि युवराज गिरीसंग तीब्र प्रतिस्प्रर्धामा छन् । जिल्लामा वाम गठबन्धनको सबैभन्दा बढी मत भएको निर्बाचन क्षेत्र न २ हो ।
पूर्व प्रधानमन्त्री केपि ओलीको सरकारका अर्थमन्त्री समेत रहेका एमाले उपमहासचिब पौडेलले २०६४ को पहिलो र २०७० को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा बुटवलबाटै निर्बाचित भैसकेका छन् ।
२०५६ सालको निर्वाचनमा पौडेल कांग्रेस नेता सूर्यप्रसाद प्रधानसंग बुटवलबाटै पराजित भएका थिए । उनी यसअघि निर्बाचन लड्दा यो क्षेत्र भने रुपन्देही ४ थियो ।
२०५१ सालमा पहिलो पटक पौडेलले पाल्पाबाट निर्वाचन जितेका थिए । दुई-दुई पटक निर्वाचन जितेपछि पौडेल जलस्रोत, रक्षा र अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि उनी लोकप्रिय नेताको छवि समेत बनाए ।
अहिलेको एमाले माओबादी केन्द्रको तालमेल गराउन पनि उनको भूमिका देखिन्छ ।
पौडेल रूपन्देहीबाट चौथौ पटक उम्मेदवार बनेका छन् उनले रुपन्देहीमा २ पटक जित र एक पटक हार ब्यहोरिसकेका छन् ।
जनताले मलाई र मैले बुटवललाई माया गर्ने हुँदा मेरो र बुटवलको कुनै पनि सम्बन्ध कहिल्यै टुट्दैन पौडेलले दाबी गरे । पौडेलले थपे, बुटवलबासीले मेरो विकल्प खोज्लान् जस्तो मलाइ लाग्दैन ।रुपन्देहीलाई विकासको नमुना बनाउनु छ ।‘
‘कालिगण्डकीको पानी तिनाउमा डाइभर्सन गर्न ३० कीमि सुरुङ बनाउने र जिल्ला का डेढसय हेक्टर जमिनमा सिंचाइ पुग्नेछ । ’उनले सो पानीबाट १ सय मेघावाट बिद्युत उत्पादन गरिने बताए । यो आयोजना अब डिपिआर चरणमा जाने उनले नागरिक आवाज संग बताए ।
एमालेले प्रदेशसभातर्फ क्षेत्र नम्बर २ बाट एमाले केन्द्रीय सदस्य लिला गिरी र निर्वतमान जिल्ला अध्यक्ष भोजप्रसाद श्रेष्ठलाई उम्मेदवार बनाएको छ ।
पौडेलका प्रतिस्प्रर्धी युवराज गिरि कांग्रेसका पुराना नेता तथा तत्कालिन जिल्लासभापति स्व पुष्पानन्द गिरीका छोरा हुन् । रुपन्देहीको ठूलो घटना २०४० सालको सुरजपुरा हत्या काण्डको पिडित परिवार सदस्य समेत गिरि हुन् ।
जुन घरमा कांग्रेसको कार्यक्रममा स्व गिरिजाप्रसाद कोइराला,शुशिल कोइराला अहिलेका प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा,रामचन्द पौडेलमाथि तत्कालिन मण्डलेहरुले भाला खुकुरी सहित हत्या प्रयास समेत गरेका थिए भने १ जना शहिद समेत बनेका थिए ।
को हुन् त युवराज गिरि ?
प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्बाचनको मैदानमा बिभिन्न दलले उम्मेदबार उठाएका छन् ।
उनीहरुको फरक फरक हैसियत छ र पार्टीमा फरक योगदान पनि ।
रुपन्देहीको निर्बाचन क्षेत्र नम्बर २ का लागि नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधि सभा उम्मेदवार बनेका छन् युवराज गिरि ।
२०३५ सालदेखि राजनीतिमा होमिएका गिरिले सबैभन्दा पहिले भवानी माबिबाट नेबिसंघको नेतृत्व गरे ।
महासमिति सदस्य गिरी नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा निर्वाचन परिचालन समितिका संयोजक बालकृष्ण खाँणका सहयात्री पनि हुन् ।
उनी निकै सरल बक्ता हुन् ।उनी बैचारिक ब्यक्तीका रुपमा परिचित छन्।बुटवलमै बसेर सामाजिक र राजनीतिक जीवन बिताइरहेका गिरि नागरिक आवाजसंग भन्छन् -‘जनताको सेवक बन्न मैदानमा आएको छु ,यो अबसर मैले पाउनेछु ।’
‘यहाका जनताको बिश्वास जितेको छु,उहाहरुले मलाइ बिजयी बनाउनुहुनेछ ’ गिरी भन्छन् । सरल र मिजासिलो स्वभावका गिरिमा कुनै लोभ – लालचा र अहंकार देखिदैन ।फूल टाइमर्स पोटिटिक्स गर्ने गिरि स्थानीयको मनमनमा छन् ।
स्नातक तह त्रि. वि. वि.मा गरेका उनले २०४२ सालमा साढे १४ महिना जेल जीवन बिताए । १९ बर्षसम्म जिल्ला समितिमा बिभिन्न तहमा रहेको काम गरेको उनको अनुभब छ ।
नेपाल बिद्यार्थी संघबाट राजनितिमा प्रबेश गरेका गिरीले पार्टीका नगरदेखि जिल्लासम्मका बिभिन्न तहमा रहेर काम गर्दै हाल महासमिति सदस्यसम्मको जिम्मेबारी सम्हाली सकेका छन । उनी बिपि कोइराला अध्ययन प्रतिष्ठानका संस्थापक अध्यक्ष समेत हुन् ।
२ पटक चुनाव जितेका पूर्व मन्त्रीसंगको प्रतिस्प्रर्धा कस्तो हुदैछ ,जित्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्—‘यो पटक कांग्रेस कमब्याक हुन्छ हामी जित्छौं,चुनावमा भिडेपछि कोहि हेभीवेट भन्ने हुदैन,यो प्रतिष्पर्धी हो ।’ आफूले राष्ट्रिय मुद्दाहरू लिएर निर्वाचनमा होमिएको बताउदै यस पटक कांग्रेसले बुटवलमा जित हाँसिल गर्ने दाबी उनले गरे ।
बुटवलमा एमालेले बिकास गर्न सकेन,अब कांग्रेसले जनतालाइ मालिक बनाएर बिकास तीब्र पार्छ गिरिले भने ।
गिरीका सारथीमा कांग्रसबाट प्रदेशसभातर्फ १ ख मा बुटवल उद्योग बाणिज्य संघका निर्बतमान अध्यक्ष महेशमान सिंह र १ क मा मजदुर नेता युवा काजीमान श्रेष्ठ छन् ।
बुटवलमा भोट बैंक बनेको सुकुम्बासी बस्तीको समस्या ज्यूंका त्यूं
बुटवलमा निर्वाचन जित्नैपर्ने नेताले सुकुम्बासी बस्तीको मत नपाए हार्ने ठानिन्छ । जो मैदानमा छन् उनी सबै उम्मेदबारले सुकुम्बासीको मत तान्ने अनेक उपाय अपनाउने गरेका छन् ।
झण्डै १५ हजारको संख्यामा रहेका उनीहरुलाइ निर्वाचनका बेला नेताले लालपूर्जाको आश्वासन दिने गरेका छन् तर जितेपछि नेता नर्फकेको उनीहरुको भनाइ छ ।
बुटवल बार्ड नम्बर ११ देविनगरका सुकुम्बासीको मत अस्थिर मानिन्छ ।
बुटवल उपमहानगरपालिका १९ बार्ड मध्ये सवै भन्दा धेरै मतदाता रहेको बार्ड हो । १३ हजार ८८७ मतदाता छन् यहाँका बुद्धनगर, विनापते, हात्तिसुड, आदि स्थानमा बसेका सुकुम्बासीहरुको मत अस्थीरताले बिगतको निवार्चन सघै दलहरुलाई दलदलका पारेको थियो । त्यो बिगतमा पनि डां बावुराम भट्टराईले बुझेर नै उक्त बस्तीमा बास बसको थिए । देविनगर झोलुगे पुलकी सुनिता विकले तिन पटक जग्गा नाप जाच भएको जनाइन् ।
प्राय टोलहरुका अगुवालाई बोलउदै दलहरु स्थानिय कार्यकताले हामीलाई भोट दिए लालपुर्जा दिने भन्दै आउने गरेको शिवालय टोल बिकास समितिका विष्णु जि.सी.ले बताईन् । बुद्धनगरमा १६ सय घरधुरी छन् ।
फेरियो निर्वाचन क्षेत्र भुगोल :-
हालै सम्पन्न स्थानीय तहको मत परिणामले क्षेत्र नम्बर २ मा वाम गठबन्धनको मत लोकतान्त्रिक गठबन्धनको भन्दा दोब्बरभन्दा बढी देखिन्छ । यस पटक पौडेललको भूगोल फेरिएको छ । साविक रूपन्देही क्षेत्र नम्बर ४ अहिले २ मा परेको छ ।
यस क्षेत्रमा बुटवल उप–महानगपालिकाका १ देखि १३ नम्बर सम्मका वडाहरू, सैनामैना नगरपालिकाका १ देखि ४ सम्मका वडाहरू र तिलोत्तमाका १ देखि ६ नम्बर वडा पर्छन् ।
ती सबै वडाहरूदेखि नगरको मेयर र उपमेयरमा एमालेले जितेकोहो। हालै सम्पन्न स्थानीय निकायको निर्वाचन मत परिणाम अनुसार एमाले–माओवादीको मत ३६ हजार दुई सय ७९ रहेको छ । भने कांग्रेस–राप्रपाको २१ हजार पाँच सय ४१ छ । यो क्षेत्रमा जनमुक्तिले दुई हजार सात सय ४५ मत ल्याएको थियो । यहाँ १ लाख ५ हजार २ सय छ मतदाता रहेका छन् ।
नयाशक्तिका युवा पुस्ता मैदानमा :
यहा बाबुराम भट्टराइ नेतृत्वको नयाशक्तिले युवा पुस्ता मैदानमा उतारेको छ । ३२ वर्षीय युवा हुन् मनिकर कार्की पनि बिष्णु पौडेलका प्रतिस्प्रर्धी हुन् ।
एक दसकदेखि सक्रिय रुपले पत्रकारिता तथा लेखनमा संलग्न अनि पेशागत रुपमा विश्वविद्यालय क्याम्पसमा प्राध्यापनदेखि बैंकिंग तथा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुमा पनि काम गरेको अनुभव संगालेका कार्की सबै पेशागत जिम्मेवारी छाडेर राजनीतिमा होमिएका छन् । आम नागरिकको अवस्था बदल्ने उद्देश्यले राजनीतिमा लागेको बताउने उनै कार्की अहिले नयाँ शक्ति पार्टीको तर्फबाट रुपन्देही क्षेत्र नं. २ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य पदको उम्मेदवार बनेका छन् ।‘
देश परिवर्तन भएन, बेरोजगारीको अन्त्य भएन, दुःख बदलिन सकेन , हामी त्यही अवस्था बदल्ने अभियानमा छौं , अबको राजनीतिक कार्यभार युवापुस्ताले बदल्ने हो, हामी त्यही अभियानमा छौं , त्यसैले समग्र युवापंक्तिको प्रतिनिधित्व गर्दै म चुनावी मैदानमा उत्रिएको छु र म यो अभियानमा निकै उत्साहका साथ लागिरहेको छु ।’उनले सुनाए । दुइमा प्रदेशसभा सदस्य उम्मेदवार तेज कुमार घिमिरे छन् । र अर्का उम्मेदबार पंकज राइ छन् ।
साझा बिबेकशीलले संगठन बनाउंदै :
हरिकृष्ण अधिकारी रुपन्देही २ बाट मैदानमा छन् । उनीहरु आफ्नो पार्टी विधि र पद्धतिको पालना गर्दै सु—सस्कृत राजनीति मार्फत् समृद्धी हासिल गर्ने उद्देश्यले चुनाव लडेको बताउछन् ।
३२ बर्षे युवा अधिकारीले अब परिबर्तन युवाले नेतृत्व लिएर गर्नुपर्ने बताउछन् । पुराना राजनितिका दलभित्र झेलिएको फोहोरी खेललाई सफा गर्न युवाहरु सफल हुन नसकेको अवस्थामा नया पद्धति सहितको विवेकसिल साझा पार्टी जन्मेको अधिकारीले बताए ।
अवको आशा विवेकशील साझा भन्ने नाराका साथ सो पार्टीले सार्वजनिक गरिएको घोषणा पत्रमा राजनितिलाई सुसंस्कृत बनाई सामाजिक सेवाको रुपमा स्थापित गदै भ्रष्टचार, गरिबि र जातिय सुन्य राष्ट्र निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ । रुपन्देही क्षेत्रनम्वर २ प्रदेश सभा २ का उम्मेदवार निलम अधिकारी ,क्षेत्रनम्वर २ प्रदेश शभा १ का गणेश पन्थी उम्मेदबार हुन् ।
संघीय समाजबादी फोरम नेपालमा महिला उम्मेदबार :
क्षेत्र न दुइमा संघीय समाजबादी फोरम नेपालले महिला उम्मेदबार उठाएको छ । रुपन्देही २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि किरण गुप्ता र प्रदेश सभामा रेनु अग्रहरी छन् ।